MacOS ပုံစံ File တွေကို Windows မှာ Preview ကြည့်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?
25 Jun 2018 . 4:03 PM
တကယ်လို့ သင်က MacOS ကို အသုံးပြုတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် File တွေကို Space Bar ကို ဖိထားလိုက်ရုံနဲ့ Quick Preview အနေနဲ့ ကြည့်လို့ရတဲ့ Feature ကို သိကြမှာပါ။ အဆိုပါ Feature က Windows အသုံးပြုသူတွေမှာ ယခင်က မရရှိခဲ့တဲ့ MacOS အတွက် သီးသန့် Feature တစ်ခုလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ Microsoft Windows Store မှာ အခမဲ့ရယူနိုင်တဲ့ QuickLook App ကနေ တစ်ဆင့် Windows 10 အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ MacOS အသုံးပြုနေရသလိုဖြစ်သွားစေတော့မှာပါ။ အခု QuickLook App ဟာ MacOS မှာ ပါဝင်တဲ့ Quick Preview ပုံစံအတိုင်းပဲ အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ File မှာ Space Bar ကို နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ Preview ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တကယ်လို့ Photos တွေမဟုတ်ဘဲ Document တွေ၊ PDF တွေကို Preview အနေနဲ့ ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်လည်း Ctrl + Mouse Wheel ကို အသုံးပြုပြီးတော့ Zoom In, Zoom Out ပြုလုပ်နိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မဟုတ်သေးဘဲ File အမျိုးအစား အတော်များများကိုလည်း Preview ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ GIF File တွေဆိုရင်တော့ Loading အတွက် အချိန်ခဏပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
QuickLook App ကို အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ယခု Link ကနေ အခမဲ့ရယူအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
တကယျလို့ သငျက MacOS ကို အသုံးပွုတတျတဲ့သူတဈယောကျဆိုရငျ File တှကေို Space Bar ကို ဖိထားလိုကျရုံနဲ့ Quick Preview အနနေဲ့ ကွညျ့လို့ရတဲ့ Feature ကို သိကွမှာပါ။ အဆိုပါ Feature က Windows အသုံးပွုသူတှမှော ယခငျက မရရှိခဲ့တဲ့ MacOS အတှကျ သီးသနျ့ Feature တဈခုလိုဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။
အခုအခြိနျမှာတော့ Microsoft Windows Store မှာ အခမဲ့ရယူနိုငျတဲ့ QuickLook App ကနေ တဈဆငျ့ Windows 10 အသုံးပွုသူတှအေနနေဲ့ MacOS အသုံးပွုနရေသလိုဖွဈသှားစတေော့မှာပါ။ အခု QuickLook App ဟာ MacOS မှာ ပါဝငျတဲ့ Quick Preview ပုံစံအတိုငျးပဲ အလုပျလုပျမှာဖွဈပွီးတော့ ကိုယျရှေးခယျြထားတဲ့ File မှာ Space Bar ကို နှိပျလိုကျရုံနဲ့ Preview ဖျောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ တကယျလို့ Photos တှမေဟုတျပဲ Document တှေ၊ PDF တှကေို Preview အနနေဲ့ ကွညျ့ရှုမယျဆိုရငျလညျး Ctrl + Mouse Wheel ကို အသုံးပွုပွီးတော့ Zoom In, Zoom Out ပွုလုပျနိုငျဦးမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါတငျမဟုတျသေးပဲ File အမြိုးအစား အတျောမြားမြားကိုလညျး Preview ကွညျ့ရှုနိုငျမှာဖွဈပွီးတော့ GIF File တှဆေိုရငျတော့ Loading အတှကျ အခြိနျခဏပေးရမှာပဲဖွဈပါတယျ။
QuickLook App ကို အသုံးပွုခငျြတယျဆိုရငျတော့ ယခု Link ကနေ အခမဲ့ရယူအသုံးပွုနိုငျမှာပါ။